Shirka Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha Dowladda Federalka Soomaaliya | MOPIC
Shirka Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha Dowladda Federalka Soomaaliya
News	Shirka Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha Dowladda Federalka Soomaaliya
Shir Gudoomiye Abdi Diirshe, Xog-hayaha Joogtada ee Wasaaradda Qorsheynta Qaranka iyo Iskaashiga Caalamiga.
Shirkan oo ay iskugu yimaadeen Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha Dowladda Federalka Soomaaliya waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga, ujeedkiisuna ahaa xog-wareysi iyo kala war qaadasho.Xog-hayaha Joogtada ee Wasaaradda Qorsheynta oo shirka furay ayaa soo dhaweeyay dhamaan Agaasimayaasha Guud, Agaasimasyaasha waaxda Qorsheynta ee wasaaradaha, xubno ka socday xafiiska isku xirka deeqaha iyo bahda saxaafadda.
Furitaan kadib, Xog-hayaha Joogtada ayaa u mahadceliyay shaqaalaha Wasaaradda Qorsheynta iyo Hay’adda Chemonics oo shirkaan soo qabanqaabiyay, sheegayna muhimadda ay leedahay in la helo qorshe dowladeed oo mideysan, isla markaana Wasaaradda Qorsheynta dowrkeedu yahay xariirka iyo isu geynta qorsheyaasha wasaaradaha, laakiin wasaaraduhu ay tahay in ay qorshe la yimaadaan. Hadda waxaa socda qorshe sanadeedkii 2015, wasaarad kasta waxay wadaa hormarinta siyaasadaha iyo shuruucda kala duwan ee dalka, waxaan codsaneynaa in wasaarad kasta ay soo bandhigto halka ay wax u marayaan ayuu yiri Xoghayuhu.
Ahmed Nur, Madaxa Hay’adda Maareynta Musiibooyinka: Wasaaradaha waxaan ka codsaneyna in ay qorshe kasta ay ku darsadaan arrinta dib u soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga, Dalka Yemen wali qaxooti ayaa ka imaanaya, Dhadhaab isbuuc kasta laba diyaarad ayaa timaada oo sidda qaxooti iskood dalka dib ugu soo laabanaya ah, waxaan wadnaa mashruuc $600 Million ah, oo socon doona ilaa 2019 dibna loogu dajinayo ilaa 200 oo qaxootiga dhadhaab ah.
Abdullahi Shiekh, Agaasimaha Guud ee qorsheynta: WQIC ayaa asna ku dheeraaday taariikhdii ay soo martay Qorsheynta Qaranka mudadii dheereyd ee uu kasoo shaqeenayay, isagoo xusay in ay muhimad gaar ah leedahay in dalku yeesho qorshe mideysan oo dhamaan wasaaraduhu ku mideysanyihiin. Hada waxaa socda Qorshaha Hormarinta Qaran oo June 2016ka dhamaan doona, waxaan dhisnay Guddiga Talo-bixinta Qaranka (National Advisory Counsel), waxaan shaqaaleysiin doona La-taliyayaal caalami ah oo naga caawin doona Qorshahan ayuu ku gabogabeeyay.
Mohamed Hussien, Agaasinka Istaatiitikiska ee WQIC: wuxuu soo bandhigay taariikhdii ay soo martay Agaasinkan oo qeyb lixaad leh ka ah dhamaan go’aanadda dowladda, maadaama ay yihiin keydkii xogta qaran, isagoo raaciyay in hada ay bilaabeen dib u eegista Qiyaas Tirokoobki ay soo bandhigeen sanadkan, wuxuu codsi u jeediyay dhamaan wasaaradaha in ay qeyb ka noqdaan xog uruurinta, isagoo ballan qaaday in tababar Istaatiitikis ah u sameyn doonaan dhamaan wasaaradahaas. Dhinaca kale Sharciga Istaatistikiska oo dib u eegistiisu socoto ayuu sheegay in hadii uu hirgalo in Xog-uruurinta dalku si rasmi ah u hoos imaan doonto Agaasinka.
Zakariye Hassan oo ka tirsan Agaasinka ISkaashiga Caalamiga ee WQIC: ayaa asna sheegay in ay hadda ka shaqeynayaan dib usoo celinta Xuquuqda Saxiixa ee Xafiiska Ogolaanshaha Mashaariicda ee Midowga Yurub oo burburkii kadib si ku meel gaar ah Midowga yurub u fulinayay. Wuxuu kaloo xusay Mashaariic Iskaashi iyo kuwa hormarin oo ay la wadaan Dowlahada Germany iyo Japan. Mohamed Dahir oo isla agaasinkaas ka tirsan ayaa raaciyay in ay socdaan tababaro ay hey’adda Chemonics ka caawineyso wasaaradaha dowladda isla markaan ay tahay in laga faa;iideysto lalana soo xiriiro WQIC.
Abdirahman Farah (ACU): ayaa si kooban u soo jeediyay halka uu marayo New Deal-ka, sida dhisidda maamul goboleedyadda, dib u eegista Dastuurka, waxbarashada, amniga, cadaaladda, maamulka maaliyadda iyo mashruuca la socodka iyo xog keydka deeqaha dalka (AIMS).
Dalmar Hassan (WQIC): ahna Madaxa PSG5 ayaa isna si kooban uga hadlay halka uu marayo howlaha kooxdan, isagoo mid mid u falanqeeyay kooxa hoosaadka uu ka koobanyahay PSG5.
Mohamed Ali Jamac, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga iyo Madaxa PSG2: Kooxdan waxa ay wadaa howlo badan oo ay ka mid yihiin caawinta Dowladaha Turkiga iyo Mareykan ay siiyaan Soomaaliya xag milatari, Isku dhafka Ciidanka, Dhaqan calinta maleeshiyaadka, siyaasada amniga Badda Soomaaliya. Dhinaca kale Howlaha Wasaaradda Amniga waxaa ka mida ah horumarinta siyaasadda difaaca bariga iyo badda, siyaasadda dhowrista xaquuqda caruurta, mashruuca Heegan oo Boolis heer qaran ah loogu sameynayo degmo kasta, Mashruuca Guulwade oo 13kun oo Milatari ah lagu qalabeynayo, dhismaha xerooyin tababar oo loogu tala galay maleeshiyaadka, Sharciga Argagaxisada, sharciga hubka, siyaasadda hoteelada, hormarinta sharciga nabadgalyada wadooyinka, sharciga tahriibinta dadka oo loo aqoonsaday inay danbi tahay iwm.
Omar Olad, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ahna madaxa PSG1: Ayaa sheegay in kooxdan howlaha ay ka shaqeynayaan ay ka mid tahay sharciga doorashooyinka iyo kan xaduudaha federaalka.
Dr.Farah, Agaasimaha Guud ee wasaaradda Macdanta: waxaan baarlamanka u gudbinay sharciga maareynta shidaalka, waxan kaloo wadnaa sharciga dakhliga macdanta iyo cilmi baaris la xiriirta shidaalka iyo macdanta dalka.
Mohamed Osman, A.G Wasaaradda Dekedaha: Waxaan bogaadinaya WQIC oo shirkaan nagu cazuumtay, Wasaaradda Dekedaha Iyo Gaadiidka Badda waxay dib u hanatay kursigii Hey’adda Badaha Caalamiga oo ay mudo ka maqneyd, Sharciga badahha oo uu Madaxweynuhu saxiisayna waa diyaar, waxan kaloo wadnaa mashruuc lagu dhisayo 30 Dekado oo yaryar si looga faaiideysto, maal galinta dalkana wan soo dhaweyneyna.
Mohamed Adde, A.G Wasaaradda Shaqada: waxaan bilownay diwaan-galinta dhamaan shaqaalaha iyo shirkadaha/hey’adda gaarka loo leeyahay, shaqaalaha ajaanibta, hormarinta Sharciga Shaqaalaha iyo barnaamijyo shaqo abuur iyo tababaro loo furay xog-hayeyaasha dalka.
Mohamed Abdulkadir, Wasaaradda Waxbarashadda: Sanadkan waxaan qaadnay imtixaankii guud ee dugsiyada sare, ardaydii ku guuleysatay imtixaanka waxaan u helnay deeq waxbarasho oo dibadda ah sida Ethiopia iyo Sudan, iyo mid gudaha ahba sida jaamacaddaha gaarka loo leeyahay iyo Jaamacadda Soomaaliya oo halsano jirsataywaxay oo bixiyay deeqo waxbarasho, waxaa Golaha Wasiiradu ansaxiyeen Sharciga Waxbarashada aasaasiga ah.
Ali Gacal, AG ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada: Waxan dhameynay soo saarista taargooyinka kala duwan ee geediidka dhulka sida taargooyinka gaadiidka dadweynaha, gaadiidka dowladda iyo safaaradaha, Xaruntii Maamulka Hawada Soomaaliya iyo Dugsiga Barashada Duulista oo dhismo ku socdana dhawaan ayaa la dhameenaya, Sharcigii Diyaaradii Soomaliyana wan gudbinay.
Abdi Farah, AG Wasaaradda Xanaanada Xoolaha: Waxaan dib u habeyn ku sameynayna wasaaradda, waxaan kaloo hormarin ku wadnaa Ajenda guud oo uu yeesho gobolku maadaama xooluhu iskaga gooshaan dalalka dariska ah. Talo waxan soo jeedinaya in WQIC ay aruuriso baahida guud ee wasaaradaha.
Yusuf Hassan, AG Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta: 30 culumaa’udiin ayaa lagu wadaa in Masar loo diro si ay usoo bartaan wacyi galinta ka dhanka ah argagaxisada, waxan kaloo ku howlannahay dhismaha Gole sare oo culumaa’udiin oo buuxiyaha Golaha Fatwada booskoodii, waxaa hogaaminaya Madaxweynaha, waxaan kaloo wadnaa mashaariic waqaf ah.
Omar Shurie AG wasaaradda tamarta iyo biyaha: Sharciga Biyaha waxaan u gudbinay Baarlamanka, sharciga korontadana wuu socdaa, waxaan kaloo wadnaa mashruuc qalabeyn wabiyadda si loo ogaado xowliga iyo tiraha biyaha gudubta wabiyadaas, waxaan kaloo Bangiga Aduunka iyo Bangiga Hormarinta Africa la wadnaa mashaariic kala duwan oo hormarineed.
Mohamed Omar, AG wasaaradda Haweenka: waxaan ka shaqeyneynaa Sharciyo badan, sida Sharciyada Takoorka, Caruurta iyo Dambiyadda Galmadda, Gudiga Xuquuqda Aadanaha. Waxaan kaloo diyaarinay qorshe howled lagu cirib tirayo kufsiga.
Wasaaradda Kaluumaysiga: Wasaaradda Kaluumaysiga waxay ka shaqeeyneysaa dhankeeda Sharciga Kaluumaysiga, hormarinta iyo tababarka xirfadlayda kaluumaysatada ah iyo mashaariic kale oo lagu qalabaynayo kaluumaysatadda dalka. Waxaan kaloo caalamka iska kaashanaa gacan ku haynta badda Soomaaliya iyo la dagaalanka burcad badeeda.
August 31, 2015 in News	Newer Post
Somalia Investment and Development Priority Meeting